बच्चालाइ आमाको दुध नै किन ? ~ Khabardari.com
बच्चालाइ आमाको दुध नै किन ?
आमाको दुध नै बच्चालाइ स्तनपान गराउदा को फाइदा
१. बजारे महँगो दुध किन्ने खर्च बच्ने
२. आमाको स्तन मा बच्चा संगै निस्किने दुध को प्राकृतिक निकास भएर स्तन र पाठेघर को क्यान्सर बाट बच्न मद्दत पुग्ने
३. बच्चाको स्वास्थ्य तन्दुरुस्त रहने र रोग लाग्ने सभावना कम हुने
४. ६ महिना सम्म आफ्नो सिसु लाइ दुध पिलाउदा आमा हुनुको धर्म पुरा हुने
Breast feeding Tips video